Dameer Qaniinay Gaadhi Leh Midibka Karootada (Dabacase) Oo Maxkamad La Geeyay - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Dameer Qaniinay Gaadhi Leh Midibka Karootada (Dabacase) Oo Maxkamad La Geeyay
Maxkamad ku taalla dalka Jarmalka ayaa maanta go’aan ka gaadhaysa in mulkiilaha Dameer isku dayay in uu qaniino Gaadhi ah nooca raaxada uu bixinayo iyo in kale lacagta waxyeelada iyo garaafada uu Damiirkiisa u gaystay Gaadhigaasi.
15 bishii September ee sanadii aanu soo dhaafnay ayay ahayd markii Markus Zahn uu gaadhigiisa dhigtay goob gaadiidka la dhigto oo daris la ah meel xoolaha lagu xanaaneeyo oo ku taalla Vogelsberg,oo ah degmo ku taalla gobolka Hesse.
Dameer lagu magacaabo Vitus ayaa qaniinay qaybta danbe ee gaadhiga sida uu sheegay milkiilaha gaadhigaasi.
Booliiska ayaa waxa ay sheegeen in Dameerkaasi uu gaadhigani leh midibka Kaarootka uu u maleeyay in uu yahay Kaaroot ama Dabacase islamarkana uu qaniinay. Balse milkiilaha Dameerka ayaa diiday in uu bixiyo lacag dhan $7,050 doolar oo ah garaafadii iyo waxyeeladii uu Dameerkiisa u gaystay Gaadhiga. Milkiilaha Dameerka ayaa ku dooday in Dameerkiisa Vitus uusan dambi lahayn islamarkana Mr Zahn ay ahayd in aanu dhigan Gaadhiga qiimihiisu yahay 300,000 oo Yuuro meel u dhaw goobtan lagu xanaaneeyo xayawaanka. Maxkamadda Rayidka ee Giessen ayaa lagu wadaa in ay maanta go’aan ka gaadho kiiskan oo soo jiitay indhaha saxaafada gudahha Jarmalka.
Deg Deg: Siyaasiyiin U Faysal Cali Waraabe Hoggaminayow Oo Ka Qayb Galay Shirki Somalia + Faysal Oo Warbaahinta La Hadlay + Muuqaal